Ụdaume na Bekee: ụda olu na mkpọpụta okwu - UniProyecta
Mgbe ịmụchara nọmba na Bekee, ka anyị hụ ụdaume n'asụsụ a. Ụdaume ndị dị n'asụsụ Bekee, dị ka n'asụsụ Spanish, bụ naanị 5: A, E, I, O, U. Nanị ihe dị iche bụ na ụdaume dị na Bekee na -akpọ dị iche iche karịa n'asụsụ Spanish. N'ọnọdụ ụfọdụ ụdaume ndị a na -ada ụda dị iche iche, na -adabere n'okwu na kedu ihe gbara ha gburugburu.
1 Mụta ụdaume bekee
2 Ịkpọpụta ụdaume na Bekee
3 Mkpụrụedemede na Bekee: Ịkpọ okwu na ide ihe
4 Ịkpọpụta mkpụrụedemede bekee
5 Mkpụrụ okwu anụmanụ na Bekee
Mụta ụdaume bekee
para ịmụta ụdaume na bekee Naanị ị ga -eme ịkpọpụta okwu ya, n'ihi na ụdaume bụ otu ma enwere naanị 5.
Ndị a bụ ụdaume na n'akụkụ ha ka mkpọpụta okwu dị:
[wpsm_comparison_table id = »1 ″ klas =» »]
Ịkpọpụta ụdaume na Bekee
Ọ bụ ezie na ezi pronunciation nke olu in English pụtara n'akụkụ nke ọ bụla, ịge ụdaume na -eme ka ụda mara nke ọma na anyị nwere ike ịmegharị ya n'ụzọ dị mfe na enweghị nsogbu.
N'ebe a, anyị nwere vidiyo iji mụta mkpọpụta ụdaume na Bekee.
Vidiyo a na -eme ka ọ dị mfe ịkpọ ụdaume n'asụsụ Bekee, maka na ige ha ntị na -eme ka mmụta dị mfe.
Dị ka anyị nwere ike ịhụ, asụsụ Bekee na -agbanwe kpamkpam Ịkpọpụta ụdaume, ewezuga ụdaume "O" nke nwere ụda yiri onwe ya. Akwụkwọ ozi ndị kacha agbanwe bụ A, E na I. Ụdaume E, dịka ọmụmaatụ, a na -akpọ ya dịka ụdaume I nke asụsụ Spanish. N'aka nke ọzọ, a na -akpọ ụdaume m n'asụsụ Bekee "ai", dị ka a ga -asị na ọ bụ "ay" n'asụsụ Spanish.
Ịkpọ ụdaume A bụ nke kacha mara amara, maka na site na mkpụrụedemede a na -amalite mkpụrụedemede na ụdaume, ịkpọpụta ya bụ "ei", ọ dịka ịsị "hey" n'asụsụ Spanish, ọ kacha mma ige ntị n'ịkpọpụta ụda, dịka nyere vidio anyị nyere.
Mkpụrụedemede na Bekee: Ịkpọ okwu na ide ihe
Ị chọrọ ịmụta mkpụrụedemede Bekee n'ụzọ dị mfe? Ị nọ ebe kwesịrị ekwesị, site na ntuziaka a ị ga -amụta ụdị na nhazi asụsụ Bekee (Bekee), nke bụ mkpụrụedemede.
Agbanyeghị na ọ dị ka ihe nwata, ịmụta iburu n'isi na ịkpọ mkpụrụedemede nke ọma dị mkpa, ebe ọ bụ na n'ụzọ a anyị ga -amụta asụsụ bekee ngwa ngwa ma ị nwere ike nweta ya.
Ọ nwere ike ịmasị gị ịmụta banyere ụdaume na English.
Mkpụrụedemede nwere mkpụrụedemede iri abụọ na isii, mkpụrụedemede nke ọ bụla nwere ike bụrụ mgbochiume ma ọ bụ ụdaume, jiri ya mepụta okwu na ahịrịokwu.
N'asụsụ bekee enweghị Ñ, ñ na akpọrọ ha n'ụzọ dị iche.
Ịkpọpụta mkpụrụedemede bekee
Ka anyị hụ onyonyo a ka anyị mata ka mkpụrụedemede si ada ụda ụda, ụda ha dịkwa ka edere ha:
Echegbula ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị etu esi akpọ ya n'ụdị ederede, yabụ anyị etinyela vidiyo youtube na abụ ka ị nwee ike ịnụ ụda okwu ọ bụla nke ọma:
Ndụmọdụ iji melite:
Nụrụ mkpọpụta okwu ahụ nke ọma
Tinyegharịa egwu ka ị na -ege ya
Laghachi vidio ahụ ka i gee ha ntị ọzọ
Mkpụrụ okwu anụmanụ na Bekee
Aghụghọ dị ngwa ngwa iburu mkpụrụedemede mkpụrụedemede ọsọ ọsọ bụ ijikọ mkpụrụedemede nke ọ bụla na aha anụmanụ, n'ụzọ dị otu a ị ga -echeta ka esi akpọ ya ụda olu. Ọ bụ mmega ahụ magburu onwe ya ịmụta mkpụrụedemede.
Inicio » Asụsụ » Inglés » Ụdaume na Bekee: Ụda ụda na mkpọpụta okwu
Okwu 10 na "Ụdaume na bekee: ụda olu na mkpọpụta okwu"
Abụọ 7, 2017 na 11:06 pm
Ọ dị mma ma kuzie nkuzi Bekee
Abụọ 14, 2017 na 8:44 pm
Olu ndị ahụ bụ abụ mara mma nke ukwuu
October 19, 2017 na 7:33 pm
Bekee bara uru
October 20, 2017 na 2:36 pm
November 28, 2017 na 1:53 am
Daalụ, amụtala m ha n'asụsụ Bekee.
February 23, 2018 na 12:42 am
ndewo kedu ka m ga -esi amụta
MARTHA ESTHER AGUILAR
Eprel 1, 2018 na 8:41 pm
N'ezie amaghị m ha, mana ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu site n'ụzọ izizi nke izi ozi. Ọ ga -amasị m ka m nwee ike ịkpọtụrụ gị ugboro ugboro.
June 1, 2019 na 4:37 ụtụtụ
Ọgọst 9, 2019 na 5:11 pm
Septemba 26, 2019 na 2:16 pm
M hụrụ n'anya